I-Xing xing Tai Long ekhethekile ye-Cera, Ltd yasungulwa ngonyaka we-1997, ibheka ekwenzeni ucwaningo nasekuthuthukisweni komkhiqizo ophuthumayo we-alumina ceramic, umkhiqizo we-Couramic, umkhiqizo we-arbio ceramic, umkhiqizo we-silicon Carbiic, umkhiqizo we-graphite ceramic. Main As: Alumina / Zirconia Tube, Alumina / Zirconia Elento, I-Alumina / Zirconia Discstrate, Alumina / Zirconia Nozzle, Alumina / Zirconia Ball , i-alimacon carbide / graphite / bn ekhanyayo, i-silicon carbide / si2n4 ibhola, sic Plate / Board, PBN / BN Ingxenye, Ingxenye ye-PBN / BN, Ingxenye ye-PBN / BN. Yamukela ne-OEM ne-ODM.
Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi emalambu nasezitengeni zikagesi, imishini kagesi, imikhiqizo yokufudumeza kagesi, ama-nozzle, izingxenye ze-auto, izingxenye ezilwa nokuvinjwa kwezinto zokufakelwa, njll.
Le khasi Inkampani ihlala inamathela ekusindeni kwekhwalithi, ukusungulwa okusha kanye nentuthuko, ubuqotho bomkhiqizo, ukuvikela kanye nokucabanga okucatshangelwe kwamabhizinisi wezemisebenzi ngemuva komgomo. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle ezweni lonke, futhi yathunyelwa eJalimane, e-United States, eFinland, eBrazil, eRussia, i-Mexico ... Amazwe angaphezu kwama-20, ikhwalithi yomkhiqizo idunyiswe kakhulu ngamakhasimende.
"Ikhwalithi ephezulu, intengo ekhethekayo" ingabe ukuphathwa kwethu i-tenet. Silindele ngobuqotho ukubambisana nobuningi bamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, ukuthuthukiswa okuvamile!
Uyemukelwa ukuvakasha nokuphenya inkampani yethu.